tarehimarika maromaro mikasika manodidina ny CAN 2019 tetsy amin’ny fihaonan’ireo “Club des Partenaire Association Barea CAN 2019” natao tetsy Antaninarenina omaly. Nambara tamin’izany fa ny Telma no handoa ny “Prime de qualification” tsy azon’ireo mpilalaon’ny Barea tamin’ny fifaninanana CAN 2019 satria tsy hita popoka, hoy izy ny vola niditra tamin’ny fihaonana roa farany natrehan’ny Barea teto an-toerana tamin’iny 2018 iny. Nambarany ihany koa fa anisan’ireo misitraka ny vola fanomen’ny CAF an’ireo firenena mpikambana ao aminy isan-taona ny Baolina kitra Malagasy. Hisy ihany koa ny “prime de qualification” (250.000 dolara ) ho azon’ny Barea, hoy izy ary ny hisy koa ny fanomezana “prime de participation à la CAN”. Hotoloran’ny CAF lelavola 1.000.000 dolara, hoy izy, ny ekipa ho tompondakan’ny CAN 2019, 700.000 dolara no hatolotra ny faha-2, 600.000 dolara ny faha-3 ary 500.000 dolara ny faha-4. Tamin’ny fomba ofisialy ihany koa no nanambarany fa delegasiona miisa 30 ka hatramin’ny 40 isak’ireo firenena mandray anjara amin’ny CAN no hiantohan’ny CAF ary 5 andro alohan’ny fifaninanana no tokony hahatongavan’izy ireo any Egypte.